Umdlalo woncwadi: Ngubani obhale ntoni? | Uncwadi lwangoku
Umdlalo woncwadi: Ngubani obhale ntoni?
Ukuba ulandela amanqaku e Uncwadi lwangoku Ngokubanzi, ngakumbi eyam, sele uyazi ukuba ngamanye amaxesha ndiyathanda ukupapasha le ingaqhelekanga umdlalo woncwadi ukunika amandla amakhulu kunye nokunxibelelana koku. Ngamanye amaxesha sikubuze malunga nezihloko zeencwadi apho iziqwenga ezithile zoncwadi zikhutshwe kuzo. Ngeli xesha senza kube lula kuwe kwaye sikubuza kuphela ngubani okanye ngubani obhale incwadi ethile kwaye sikunika kuphela isihloko njengereferensi.
Ewe kunjalo, ayitsho ngaphandle kokuba ayikufanelanga ukubonisana nomlingane wethu osenyongweni koku: Google. Ukuba ukulungele kwaye ufuna ukuvavanya ulwazi lwakho loncwadi, siya kukushiya noMdlalo woNcwadi: Ngubani obhale ntoni?
Nguwuphi umbhali okanye ababhali ezi zihloko zilandelayo zezabo
Ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba kulo mdlalo wokubhala, ungakwenza oko ngokushiya ukuthatha kwakho inxaxheba kwicandelo lamagqabaza. Kwisithuba seveki, kwicandelo elifanayo lamagqabaza, siya kushiya zonke iimpendulo ezichanekileyo kwaye siza kukuxelela ukuba ngowuphi umfundi olungile okanye osondeleyo kuwo.
Isihloko: "I-13,99 euro".
Isihloko: "Ukudityaniswa kweececiuos".
Isihloko: "Sputnik, sithandwa sam."
Isihloko: "Amandla wangoku".
Isihloko: Into endizokuxelela yona xa ndiphinda ndikubona.
Isihloko: "Ilebhu yomoya."
Isihloko: Andililo irhamncwa.
Isihloko: "Iingoma kunye neentsomi".
Isihloko: "Uphawu lwesine."
Isihloko: "Ipaki yaseMansfield".
Isihloko: "Utsho njalo uZarathustra."
Isihloko: "Intwasahlobo enekona eyaphukileyo."
Isihloko: Umgcini ongabonakaliyo.
Isihloko: "Intombazana yam eguqukayo."
Isihloko: "Ndixelele ukuba ndingubani".
Isihloko: "Unjani ukuba ngumfazi."
Isihloko: "Imfihlelo ye-haunted crypt".
Isihloko: "Umbambisi kwiRye."
Isihloko: "Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa."
Isihloko: "Njengamanzi eTshokholethi".
Isihloko: "Iinoveli ezingumzekelo".
Lilonke zizinto zonke 25 izihloko esizikhethileyookanye kwinqaku lanamhlanje. Ukuba iyaphumelela kwaye baninzi abafundi abathatha inxaxheba kulo mdlalo namhlanje, kuya kubakho enye kungekudala apho siza kuthi sibonise izihloko ezitsha ezingama-25. Zingaphi uzokwazi ukubetha? Silunge kakhulu!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Umdlalo woncwadi: Ngubani obhale ntoni?
I-labyrinth yemimoya-icarlos ruiz zafón
izicengcelezo kunye namabali - gustavo adolfo becquer
Ngo-1984 - ugeorge orwell
umgcini ongabonakaliyo - iintlungu ezijikelezayo
umbambisi kwi-rye-jd salinger
ikhulu leminyaka lokuhlala wedwa-uGabriel garcia marquez
Iinoveli ezingumzekelo - benito perez galdos
"13,99 euro". UFrederick Beigbeder "Rhymes kunye namabali" .Gustavo Adolfo Beker "Mansfield Park"
: "Intwasahlobo enekona eyaphukileyo" .Mario Benedetti "It" .Stephen King "1984" .George OrwellUmgcini ongabonakaliyo ". UDolores Redondo" Intombazana yam eguqukayo ".Dego Ojeda" Nausea ".Jean Paul Sart" Ungaba njani ngumfazi ".Caitlin Moran" Imfihlakalo ye-haunted crypt. "UEduardo Mendoza
"Umbambisi kwiRye." USallinger "Minyaka ilikhulu yokuZimela wedwa". UGabriel García Marquez "Njengamanzi kwitshokholethi". ULaura Esquivel
"Hopscotch". UJulio Cortázar "Iinoveli ezingumzekelo". UMiguel de Cervantes uSawavedra
Ngomso kupapashwa "Namhlanje kubi, kodwa ngomso ngowam" nguSalvador Compán
Izihloko ezi-4 zokufunda okanye ukuphucula ukubhala kwi-intanethi